Si fudud Bedelka Phone Xiriirada u dhexeeya Android, macruufka iyo Symbian
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Phone Xiriirada u dhexeeya Android, macruufka iyo Symbian
Maalmahan, dad beddelo telefoonada ay si joogto ah oo ay ku jiraan baahi weyn wareejinta xiriir telefoon u dhexeeya laba telefoonada. Waxaa jira sababo badan oo ah sababta dadka ayaa isha ku sameynayo.
Qandaraasyada telefoonka ayaa u talin, dadka isticmaala telefoonka go'aansato in ay doortaan side kale inuu saxiixo heshiis phone kale.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay yihiin sare u tafaxeytey telefoonada cusub ee iminka iyo qabow. Sidaas darteed, waxay inta badan ilaawaan taleefannadooda jir, waayo, mid cusub.
Telefoonnada ayaa la jebiyey ama la xado.
Inkasta oo aad dooran kartaa in ay sameeyaan kala iibsiga xiriir ah oo ay iCloud ama xiriir telefoonka hagaagsan oo Gmail iyo Outlook, labada ma fiicna. Waxaa laga yaabaa in uu soo daato macluumaad gaarka kuu ah.
Habka ugu fiican ee aad nuqulka xiriir telefoonka waa in la isticmaalo qalab dhexe oo aad si toos ah nuqul karo xiriirada ka mid phone in kale. Wondershare MobileTrans waa sida qalab kala iibsiga phone waxtar leh. Waxaa kuu saamaxayaa inaad sameyso suuqa kala iibsiga xiriirka telefoonada socda Android, Symbian iyo macruufka ee ka mid click. Haddii aad saxiixday in xisaab-aad, sida iCloud, Yahoo! iyo Facebook on your source telefoonka, MobileTrans iyaga iyo sidoo gudbin doona telefoonka Ahaado.
Xiriir taleefan Transfer dhexeeya Android, macruufka iyo telefoonada Symbian
Download MobileTrans iyo samayn kala iibsiga, isagoo ah hanuuniye kuu sheego. Waa wax aad u sahlan. Screenshot hoos ku qoran yihiin oo ku saabsan kala iibsiga ka Nokia (Symbian) si iPhone. The Casharrada ku saabsan suuqa kala iibsiga phone kale oo ay ku jirto suuqa kala iibsiga ka Symbian in Android, Android inay iPhone, iwm waa la mid ilaa xad.
Tallaabada 1. Daahfurka MobileTrans hore
Si aad u billowdo la, aan bilowno tan telefoonka qalab kala iibsiga ka dib markii ay ku rakibidda. Suuqa ayaa aasaasiga ah arbushin doonaa. Tag Phone in Transfer Phone oo guji Start .
Fiiro Gaar ah: Waxa ay taageeraan telefoonada 2,000+ ku salaysan Android, Symbian iyo macruufka ay ka mid yihiin Apple, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, iyo More !
Tallaabada 2. Isku aad laba telefoonada socda Android / macruufka / Symbian in kombiyuutarka
Markaas, xiriiriyaan laba telefoonada xisaabinta ah. Marka ay ku xiran tahay, isla markiiba MobileTrans iyaga lagu ogaan doonaa. Sida aad ka arki, waxyaabaha la koobiyeyn karaa waxaa lagu calaamadeeyay. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xiriiro, ka saar marks ka hor waxyaabo kale oo u dhigma.
Waxaad riix kartaa "data Clear hor nuqul", haddii aad rabto in aad u faaruqiso buugga telefoonnada si aad u socoto.
Fiiro Gaar ah: Magacyada telefoonada aad lagu soo bandhigi doonaa meelo ka mid ah "Source" iyo "Destination". Waxaad riix kartaa "Flip" dhexeeya labada telefoonada in la beddelo meelahooda.
Tallaabada 3. Sidee inay si fudud ku wareejiso xidhiidhka ka dhexeeya laba telefoonada
Hadda, guji "Start Copy" oo samayn iibsiga. Inta lagu guda jiro horumar la xiriir kala iibsiga, aad labada telefoonada ku xiran waqtiga oo dhan.
Sida qalab kala iibsiga phone awood badan, MobileTrans kaa caawinaysaa in aad wareejiso sida ugu badan xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, photos, music, videos oo si fudud oo si sahlan loo Apps. Ka sokow, waa barnaamij nabad ah. Sidaa daraadeed, marna ma u baahan tahay inaad ka welwelina wixii xog ah laga badiyay. Waxaa Download, oo waxaad ka heli doontaa faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan.